“Waxaanu samaynay waxa shicibkayagu doortay, meel looga soo noqonaayaana ma jirto” | FooreNews
Home wararka “Waxaanu samaynay waxa shicibkayagu doortay, meel looga soo noqonaayaana ma jirto”
“Waxaanu samaynay waxa shicibkayagu doortay, meel looga soo noqonaayaana ma jirto”
fooreFeb 25, 2012wararka0
Hargeysa (Foore)- Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ayaa caalamka ku booriyay inaanay inaan xalka Somalia ku imanayn dawlad dhexe oo caalamku dusha kaga keenayo, hase yeeshee ay xalku ka dhalan karo nabad-gelyo seeska hoose laga soo dhiso sida Somaliland ay soo sameysay.
Madaxweynuhu waxa kale oo madaxda kontonkii dawladood ee goob jooga ka ahaa shirka London uu uga waramay sida aanay gorgortanka u geli Karin qadiyadda madax-banaanidda Somaliland. Sidaasi waxa lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyadda oo u dhignaa sidan:-
“Madaxwaynaha Somaliland, Mudane Axmed Maxamed (Siilaanyo) wuxuu 23-kii bishan maalintii ka qayb galay shir lagu qabtay magaalada London ee Waddanka Ingiriiska. Shirkan waxa ka qayb galay 54 Waddan iyo Hayadaha Caalamiga ah sida Qaramada Midoobay iyo Ururka Midowga Africa. Shirka waxa furay Raysal wasaaraha Waddanka Ingiriiska, waxa kale oo ka hadlay Hillary Clinton, Wasiirka Arrimaha Dibada ee Maraykanka, waxa kale oo ka hadlay Ban Ki-moon oo ah Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay.
Intaa ka dib waxa hadlay dhamaan 50kii Waddan ee ka soo qayb galay. Madxwaynaha Somaliland wuxuu halkaa ka jeediyay khudbad, wuxuu u sheegay madaxdii shirka fadhiday inaan nabada Soomaalida loo raadinayaa aanay ku imanaynin nidaam lagu khasbo dawlad dhexe oo caalamku u soo dhiso, ee sidii aanu anaguba samaysanay ay ku imanayso marka hoosta laga soo dhiso, taasaa nabad waarta Soomaliya u keenaysa. Madaxwayne Siilaanyo wuxuu intaa ku daray in Somaliland oo la ictiraafaana ay wax ka tarayso nabad gelyada Soomaaliya.
Somaliland waxay go’aansatay in madaxnimadeeda iyo qaranimadeeda la soo noqoto oo ku ekaato xuduudihii jiray 1960. Anagu waxaanu nahay dawlad dimuqraadi ah, waxa aanu samaynay waxa shicibkayagu doortay, meel looga soo noqonaayaana ma jirto, waxaanu ku soconaa rabitaanka shicibkayaga. Madaxwaynuhu wuxuu caalamka ka waydiistay inay keenaan wada hadalkii lagu soo dhowayn lahaa aqoonsiga Somaliland. Madaxwaynuhu waxa kale oo uu ka hadlay doorashooyinkii Somaliland qabsatay 20kii sannadood ee la soo dhaafay.”
Previous PostWasiirka Arrimaha Dibadda oo ka hadlay masaalixda Somaliland uga soo baxay shirkii London Next PostMaxay Wiliam Hugue Iyo Madaxweyne Siilaanyo kaga wada hadleen kulankoodii shalay?